Izaho miasa mafy tena tsotra sy tsy mivadika ny olona, aho tena amim-panajana, ary vonona ny hanome ny fo ny olona tsara mba tahony. Izaho tokana neny nisara-panambadiana izay te hanana olona izay afaka mandray ahy ho toy izay aho minters ny fifandraisana aho, mahatoky sy tsy mivadika. Efa efatra ny ankizy izy rehetra miaraka amiko, toy ny amin’izao fotoana izao aho miasa neny eto Dubai efa ho iray taona.
zava-kanto, kolontsaina sy ny tantara mba hizara ny fitiavana ny masoandro, oysters’ ny olona-ny fijerena ny fitiavana manantena aho fa izy manome ahy ny sasany ihomehezany eo. Aho tena tony ny fanetren-tena feno fitiavana sy nidina tety an-tany ny olona mandrakariva ny tso-po amin’ny teniny sy amin’ny asa ataony-te-hihaona olona mitovy ary jereo izay hitondra antsika.
Ny vehivavy arabo vondrom-piarahamonina izay afaka hihaona iray ny ankizivavy
Lasa mpikambana ao amin’ny Fitiavana mifohaza ianao hahazo ny tena fahafahana mifankahita amin’ny tsara tarehy ny vehivavy sy ny ankizivavy.
Mihaona sy mifampiresaka amin’ny vehivavy ary maimaim-poana tanteraka amin’ny Fitiavana mifohaza
Hanatevin-daharana ny site amin’ny telo dingana mora, ampio ny mombamomba azy, amin’ny alalan’ny fikarohana ny tovovavy tsara tarehy ny dokam-barotra sy hifidy ny aina indrindra ny fomba fifandraisana amin’izy ireo. Mailaka, indray mipi-maso hafatra na chat room no fomba azontsika atolotra ny mpanjifa mba hahatratra ny ankizivavy mijery toy ny anao ho eo an-toerana tsotsotra ny fiarahana na ny androm-piainany ny fifandraisana.
← Rosiana ny tovovavy ho an'ny manan-karena ny Arabo
Ny fiarahana amin'ny aterineto sy amin'ny chat arabo maimaim-poana amin'ny webcam →